बालेनपछि अर्का चर्चित स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि पाए ‘लौरो’ चुनाव चिह्न नै, अब के हुन्छ ? — Imandarmedia.com
बालेनपछि अर्का चर्चित स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि पाए ‘लौरो’ चुनाव चिह्न नै, अब के हुन्छ ?
काठमाडौं। आसन्न स्थानिय निर्वाचनलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले रोचक बनाउने भएका छन्। सबैभन्दा प्रतिक्षित बनेको छ स्थानिय तह निर्वाचनमा महानगरपालिकाको चुनाव। मुख्यतः काठमाडौं, भरतपुर र पोखरामा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुलाई सबैले प्रतिक्षाका साथ हेरिरहेका छन्।
निर्वाचन आयोगले ३० वैशाखमा हुन लागेको स्थानीय चुनावमा उम्मेदवारी दिएका स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई चुनाव चिह्न वितरण गरेको छ। ११ र १२ वैशाखमा देशभरका विभिन्न स्थानीय पालिकाहरुमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका व्यक्तिहरुलाई आयोगले चिह्न दिएको हो।
काठमाडौं महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका बालेन्द्र शाह बालेनले लौरो चुनाव चिह्न पाएका छन्।
लौरो चुनाव चिह्न पाएपछि प्रतिक्रिया दिँदै बालेनले आफूले पाएको लौरो असहायका लागि सहार भएको र गलत काम गर्नेका लागि दण्डको रुपमा रहेको भन्दै अब चुनाव जित्ने पक्का भएको बताए।
यस्तै, भरतपुर महानगरपालिकामा सत्ता गबठन्धनको उम्मेदवारको विरुद्धमा स्वतन्त्र उठेका जगन्नाथ पौडेलले भुइँकटहर चुनाव चिह्न पाएका छन्। उम्मेदवारी फिर्ता गराउनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड,
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण तथा राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठसमेत लागे पनि टिकेका पौडेलले अब भुइँकटहर चिह्नबाट चुनाव लड्नेछन्। पोखरा महानगरपालिकामा अटेरी समूहका तर्फबाट मेयर र वडा अध्यक्षका प्रत्यासीलाई चुनाव चिन्ह लौरो प्रदान गरिएको छ।
शनिबार निर्वाचन आयोगले पोखरा महानगरपालिकामा अटेरी समूहका तर्फबाट मेयर र वडा अध्यक्षका प्रत्यासीहरुलाई चुनाब चिन्ह लौरो प्रदान गरिएको हो।
अटेरी समूहबाट पोखराको मेयरका प्रत्यासी गणेश पौडेलले अटेरी समूहका वडा अध्यक्षसम्मका उम्मेदवारले लौरो चुनाव चिन्ह प्रदान गरिएको बताए। यसअघि काठमाडौँमा स्वतन्त्र मेयरका उम्मेदवार बालेन शाहले पनि चुनाब चिन्ह लौरो पाएका थिए।
फरक फरक ठाउँमा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारले एउटै चुनाव चिह्न पाएपनि फरक नपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।